ခြူးစစ်ဟန် ပြီးတဲ့နောက် ဒီတစ်ပတ် မှာ Myanmar Idol Season (4) ကနေ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာရမယ့်သူက ဘယ်သူများဖြစ်မလဲ? – Daung
ခြူးစစ်ဟန် ပြီးတဲ့နောက် ဒီတစ်ပတ် မှာ Myanmar Idol Season (4) ကနေ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာရမယ့်သူက ဘယ်သူများဖြစ်မလဲ?
Myanmar Idol Season (4)ၿပိဳင္ပြဲႀကီးက လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ တစ္စတစ္စ နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မွုေတြ ျပင္းထန္လာၿပီး ပရိသတ္အားေပးမွုကလည္း အေတာ္ကို အေရးပါတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုကိုလည္း ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္ေအာက္တိုဘာလ(၃၁)ရက္ေန႔ ညမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့တဲ့ Performance Showၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲဝင္(၁၁)ေယာက္ စလုံးက ဒိုင္ေတြေရြးခ်ယ္ ရခက္ေလာက္ေအာင္ သီဆိုယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေပမဲ့လည္း ပရိသတ္ေတြရဲ့ Voting နဲ႔ ေရြးခ်ယ္တာျဖစ္တာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြရဲ့ အားေပးမွုကလည္း အေတာ္ေလးကို အေရးပါေနပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္ သီဆိုယွဥ္ၿပိဳင္မွုရဲ့ Result Show ပြဲမွာေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အက္စတာေဒါ့သ္ခ်င္းဆုန္ က Voting အမ်ားဆုံးရရွိခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္ျခဴးစစ္ဟန္ ကေတာ့ Voting အနည္းဆုံးနဲ႔ Myanmar Idol Season (4) ကေန ႏွုတ္ဆက္ထြက္ခြာခဲ့ရပါတယ္။ အခုတစ္ပတ္ မွာက်န္ခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတြကေတာ့ Rock သီခ်င္းေတြနဲ႔ သီဆိုယွဥ္ၿပိဳင္ ရတာျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္ (၁)ေယာက္ခ်င္းစီရဲ့ သီခ်င္းေရြးခ်ယ္မွုေတြ နဲ႔ အမိုက္စား သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖမွုေတြကိုလည္း ပရိသတ္ေတြခံစားေတြ႕ျမင္ခဲ့ရမယ္ထင္ပါတယ္။
ဒီတစ္ပတ္ရဲ့ Top (10) Rock week (Performance Show)မွာေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတြကအေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေပမဲ့လည္း ၿပိဳင္ပြဲရဲ့ ထုံးစံအရ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ တစ္ဦးကေတာ့ ႏွုတ္ဆက္ထြက္ခြာရဦးမွာပါ။ကိုယ္အားေပးတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ႏွုတ္ဆက္ထြက္ခြာျခင္း မထြက္ခြာျခင္းကေတာ့ အားေပးတဲ့ ပရိသတ္အေပၚမွာ မ်ားစြာမူတည္ေနတဲ့အတြက္ ပရိသတ္ေတြက ကိုယ္အားေပးတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကို ႏွုတ္ဆက္ မထြက္ခြာရေအာင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ Voting ေပးေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ကဲ ပရိသတ္ႀကီးေရ ဒီတစ္ပတ္မွာ Myanmar Idol ကႏွုတ္ဆက္ထြက္ခြာၿပီး အိမ္ျပန္ရမယ့္ သူက ဘယ္သူျဖစ္မယ္ ထင္လဲ။
crd : burmeseasia
Myanmar Idol Season (4)ပြိုင်ပွဲကြီးက လက်ရှိ အချိန်မှာ တစ်စတစ်စ နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေ ပြင်းထန်လာပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုကလည်း အတော်ကို အရေးပါတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကိုလည်း ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်အောက်တိုဘာလ(၃၁)ရက်နေ့ ညမှာ ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့တဲ့ Performance Showပြိုင်ပွဲမှာတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်(၁၁)ယောက် စလုံးက ဒိုင်တွေရွေးချယ် ရခက်လောက်အောင် သီဆိုယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ Voting နဲ့ ရွေးချယ်တာဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကလည်း အတော်လေးကို အရေးပါနေပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ် သီဆိုယှဉ်ပြိုင်မှုရဲ့ Result Show ပွဲမှာတော့ ပြိုင်ပွဲဝင် အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန် က Voting အများဆုံးရရှိခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်ခြူးစစ်ဟန် ကတော့ Voting အနည်းဆုံးနဲ့ Myanmar Idol Season (4) ကနေ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ အခုတစ်ပတ် မှာကျန်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတော့ Rock သီချင်းတွေနဲ့ သီဆိုယှဉ်ပြိုင် ရတာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင် (၁)ယောက်ချင်းစီရဲ့ သီချင်းရွေးချယ်မှုတွေ နဲ့ အမိုက်စား သီဆိုဖျော်ဖြေမှုတွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေခံစားတွေ့မြင်ခဲ့ရမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Top (10) Rock week (Performance Show)မှာတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကအကောင်းဆုံးကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်း ပြိုင်ပွဲရဲ့ ထုံးစံအရ ပြိုင်ပွဲဝင် တစ်ဦးကတော့ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာရဦးမှာပါ။ကိုယ်အားပေးတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခြင်း မထွက်ခွာခြင်းကတော့ အားပေးတဲ့ ပရိသတ်အပေါ်မှာ များစွာမူတည်နေတဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေက ကိုယ်အားပေးတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ကို နှုတ်ဆက် မထွက်ခွာရအောင် အပြိုင်အဆိုင် Voting ပေးနေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ကဲ ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီတစ်ပတ်မှာ Myanmar Idol ကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာပြီး အိမ်ပြန်ရမယ့် သူက ဘယ်သူဖြစ်မယ် ထင်လဲ။
ရတနာဆိုင်ကြော်ငြာရိုက်ကွင်းမှာ အလှချင်းပြိုင်နေကြတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်၊ ရွှေမှုံရတီ၊ နေခြည်ဦးနဲ့ မေမြင့်မိုရ်
တက္ကသိုလ်ဆရာမလုပ်ခဲ့တဲ့ မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ဝင်းမင်းသန်းကို အတုယူခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့ ဖက်ရှင်
ပရိသတ်တွေ အံ့အားသင့်သွားအောင် Pre Wedding ပုံလေးတွေတင်လိုက်တဲ့ လူပျိုကြီး ခန့်စည်သူ
မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့ ပထမဆုရှင်ဘယ်သူဖြစ်မလဲ လောင်းကြေးထပ်ထားတဲ့ ရဲနောင်နဲ့ပိုးမီ
“ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အလိုကိုလိုက်ခဲ့တဲ့ ရွှေကစ်လေး”
Daung by copyright@2019